Owe-OPW uthi akanandaba nezinkukumo zakuTwitter | News24
Johannesburg - Umethuli wohlelo olutshengisa ku-DStv ku-161 njalo ngeSonto kusihlwa i-Our Perfect Wedding, uNomsa Buthelezi, uthi akumkhathazi ukugxekwa ngezimpahla azigqokayo.
Lo mlingisi weLockdown, owaqala ukuvela ku-OPW ebambele uThembisa Mdoda ngesikhathi esathathe ikhefu kulolu hlelo, utshele abephephabhuku iDrum ukuthi akekho enkundleni yezokuxhumana uTwitter kodwa uyakwazi okubhalwa ngabantu ngaye kuwo, bephawula ngendlela agqoka ngayo.
"Angizigqokisi, kunabantu abangigqokisayo," echaza.
OLUNYE UDABA:Kumenyezelwe umethuli omusha we-OPW
"Uma uzizwa sengathi angigqoki kahle futhi ungumthungi, ngiyazicelela bandla ungithungele ingubo enhle," esho ehleka.
Kodwa uNomsa, uvumile ukuthi loyo omgqokisayo akamenzi abemuhle ngesinye isikhathi.
"Kwesinye isikhathi ngike ngibone ingubo ngizibuze nje ukuthi yini le, ngivele ngiphithane ikhanda. Kodwa uma ukude nekhaya akukho ongakwenza ngaphandle kokuthi ugqoke lokho onikezwa kona."
Nakuba kunjalo, uNomsa, ophinde adlale indawo kaMaMnisi kwiSibaya, uthi ophrojusa be-OPW yibo abamthengela izimpahla azigqoka kumabonakude.
"Ngiyazi ukuthi uTwitter uye ube nonya kodwa kunabantu abadelela uNomsa ngenhloso yokuzizwa bengcono, ngakho anginendaba. Uma ungamthandi uNomsa cisha umabonakude wakho noma ushintshe isiteshi," esho.